referral-irs - ทรูมันนี่ วอลเล็ท ใช้ได้ทุกเบอร์ทุกค่าย
သူငယ်ချင်းမှ သူငယ်ချင်းသို့ နိင်ငံတကာငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု သုံးရန်တိုက်တွန်းပြီး ငွေသားဆုလက်ဆောင်ရနိုင်သည့်အခွင့်အရေး
1) ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၂၁ မှ စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၂၁ ထိ
(ဤကာလတွင် မိမိမိတ်ဆွေများအား TrueMoneyဝေါလပ်တွင် အကောင့်ဖွင့်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပြီး၊ TrueMoneyဝေါလပ်ထဲမှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ငွေလွှဲခြင်းအား ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်)
အဆင့် ၁။ Truemoney ဝေါလပ်အသုံးပြုသူ (ဖိတ်ကြားသူ/Inviter) သည် Truemoney ဝေါလပ်အကောင့်ကို အသုံးပြုရန် သူငယ်ချင်းများ (ဖိတ်ကြားခံရသူ/Invitee) ကို တိုက်တွန်းပြီး အကောင့်ကိုအောင်မြင်စွာဖွင့်ပေးပြီး ကုမ္မဏီမှ အတည်ပြုမှုရရှိရမည်။
အဆင့် ၂။ ဖိတ်ကြားသူသည်ကုမ္ပဏီမှထောက်ပံ့ထားသော အွန်လိုင်းပုံစံ ဖောင် ဖြည့်ပြီးညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။
အဆင့် ၃။ အဆင့် ၂ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအွန်လိုင်းပုံစံ ဖောင်တွင်အောင်မြင်စွာဖြည့်စွက်ပြီး ဖိတ်ကြားသူသည် ဖိတ်ကြားခံရသူ သူငယ်ချင်းအား ဖိတ်ကြားပြီး Truemoney ဝေါလပ်အပီလီကေးရှင်း ကို အသုံးပြုပြီး မြန်မာပြည်သို့ ဘတ် ၂၀၀၀ အနဲဆုံးငွေလွှဲရန်တိုက်တွန်းပြီးအောင်မြင်စွာငွေလွှဲရမည်။
အဆင့် ၁။ ကမ်ပိန်းကာလအတွင်း အောင်မြင်စွာမှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်နိုင်လျင် ကုမ္မဏီမှအတည်ပြုမှု ရရှိသည့် ဖိတ်ကြားခံရသူ တယောက်အတွက် ဖိတ်ကြားသူသည် ဘတ် ၅၀ လက်ခံရရှိမည်။
အဆင့်၂။ဖိတ်ကြားခံရသူသည်ကမ်ပိန်းကာလအတွင်းအောင်မြင်စွာငွေလွှဲမှုပြုလုပ်နိုင်လျင် ဖိတ်ကြားသူသည်အောက်ဖော်ပြပါဇယားအတိုင်းဆုလက်ခံရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။(တကြိမ်လျင် ငွေလွှဲမှုပမာဏ ၂၀၀၀ ဘတ် အနဲဆုံးငွေလွှဲရမည်ဖြစ်ပြီး ဖိတ်ကြားသူသည် တလလျင် အများဆုံး ဘတ် ၁၀၀၀ ထိသာရနိုင်။)
*ပထမလနှင့်ဒုတိယလဆုရရှိရန်အတွက်ဖိတ်ကြားခံရသူသည်နှစ်လဆက်တိုက်ငွေလွဲမှုပြုလုပ်ပေးရမည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းပျက်ကွက်ခဲ့လျင်ထိုလအတွက်သတ်မှတ်ထားသည့်ဆုကိုလက်ခံရရှိမည်မဟုတ်ပါဥပမာအားဖြင့်ဖိတ်ကြာခံရသူသည်ပထမဆုံးလဖြစ်သောဇူလိုင်လလသုညတွင်ငွေလွှမှုပြုလုပ်ပြီး နောက်လတွင်မပြုလုပ်ပဲစက်တင်ဘာမှထပ်မံပြုလုပ်လျင်ဘတ် ၅၀ ဇူလိုင်လ လသုညအတွက်သာရရှိန်ုင်မည်။
မှတ်ပုံတင်မှုပြုလုပ်ရန် လဒ် : : https://www.truemoney.com/my/referral-irs-inapp/
အောက်ဖော်ပြပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် ငွေသားဆုရယူနိုင်သော (ကမ်ပိန်း)အတွက် မြန်မာပြည်သို့တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု မိတ်ဆွေသစ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအစီအစဥ်တွင်ပါဝင်လျှောက်ထားသူများအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။
ဤကမ်ပိန်းကိုထရူးမန်းနီးကုမ္ပဏီလီမိတက် (“ကုမ္ပဏီ”) ကစီစဉ်သည်။
ဖိတ်ကြားသူသည် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရသူ၏ဖုန်းနံပါတ်အား ဆုရရှိဖို့ရန်အတွက် ကုဒ်နံပါတ်အနေဖြစ်အသုံးပြုဖြည့်သွင်းရင်ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုအာမခံပါသည်။ထိုကဲ့သို့သောဖြည့်သွင်းခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုများသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများရှိပါက, ဖိတ်ကြားသူတစ်ဦးထဲတွင်သာတာဝန်ရှိပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မျှမပါဝင်ပါ။
ဖိတ်ကြားသူက ပြန်အမ်းငွေဆုစာရင်းအတွက် ဖိတ်ခေါ်ထားသူတစ်ဦးလျှင် တစ်ကြိမ်သာဆုလက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ထို့အတူဖိတ်ခေါ်ထားသူတစ်ဦးမှ တစ်လလျှင်ဘတ် 1,000 အထက် မြန်မာပြည်သို့တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းသည်လည်းအတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ဤအစီအစဥ်၌ ဖိတ်ကြားသူတစ်ဦး ထက်ပိုသောအခါ။ ဖိတ်ခေါ်ခံရသူ၏အကောင့်ကိုပထမဦးဆုံးအောင်မြင်အောင်မှတ်ပုံတင်ထားပေးသူကိုဆုလက်ခံရရှိဖို့ရန်အတွက်ဦးစားပေးမည်ဖြစ်သည် (အဆင့် 1) ။ ထို့နောက် အဖိတ်ခေါ်ခံရသူ၏အကောင့်သည် ဖိတ်ကြားသူမှကုမ္ပဏီကပေးထားသော အွန်လိုင်းစာရင်းထဲထည့်သွင်းပြီးနောက်5ရက်တွင်းအောင်မြင်စွာမှတ်ပုံတင်ထားရပါမည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် ဖိတ်ကြားသူမှကုမ္ပဏီကပေးထားသော အွန်လိုင်းစာရင်းထဲထည့်သွင်းပြီး5ရက်ကျော်မှမှတ်ပုံတင်ခြင်းပြီးစီးပါက၊ အခြားသောဖိတ်ကြားသူက ဆုကိုအစားထိုးရရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤဆုများကို အခြားသောသူထံသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ငွေသားသို့ လဲလှယ်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
ဖိတ်ကြားသူအတွက်ဆု (အဆင့် 1), ဆုကို ဖိတ်ခေါ်ခံရသူ၏အကောင့်ကို ကုမ္ပဏီဖက်မှအောင်မြင်သည်ဟုအတည်ပြုပြီးနောက် လုပ်ငန်းစဥ်7ရက်အတွင်း ဖိတ်ကြားသူ၏ ထရူးမန်းနီးဝေါလပ် အကောင့်ထဲသို့ ဖြည့်သွင်းပေးပါလိမ့်မည်။ ဖိတ်ကြားသူအတွက် (အဆင့် 2), ဆုကို ဖတ်ခေါ်ခံရသူမှ မြန်မာပြည်သို့တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကိုအောင်မြင်စွာငွေလွှဲအသုံးပြုပြီးနောက် လုပ်ငန်းစဥ်7ရက်အတွင်း ဖိတ်ကြားသူ၏ ထရူးမန်းနီးဝေါလပ် အကောင့်ထဲသို့ ဖြည့်သွင်းပေးပါလိမ့်မည်။
အကယ်၍ဤအစီအစဥ်တွင် ဖိတ်ကြားသူအားလိမ်လည်မှုတစ်ခုခုတွေရှိခြင်း၊ မှားယွင်းနေခြင်း နှင့် စည်းကမ်းချက်များချိုးဖောက်သည်ဟုတွေ့ရှိပါက ဥပဒေချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်များအရဖိတ်ကြားသူသည်ကမ်ပိန်းတွင်ပါ၀င်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဆုကိုရရှိရန်အရည်အချင်းမပြည့်မီဟုယူဆပါမည်။ကုမ္ပဏီသည်ကြိုတင်အသိပေးမှုမရှိဘဲဆုကိုလက်ခံခြင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အသေးစိတ်များနှင့် / သို့မဟုတ်ကမ်ပိန်း၏ဆုများကိုကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုလွတ်လပ်စွာပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ရန်သင့်လျော်သည်ဟုယူဆပါကကုမ္ပဏီတွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။မည်သည့်အငြင်းပွားမှုမျိုးတွင်မဆိုကပ်ပိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်အားလုံးအပေါ်ကုမ္ပဏီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာနောက်ဆုံးနှင့်အတည်ဖြစ်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, 1240 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အဆင့် ၃ ။ အဆင့် ၂ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအွန်လိုင်းပုံစံ ဖောင်တွင်အောင်မြင်စွာဖြည့်စွက်ပြီး ဖိတ်ကြားသူသည် ဖိတ်ကြားခံရသူ သူငယ်ချင်းအား ဖိတ်ကြားပြီး Truemoney ဝေါလပ်အပီလီကေးရှင်း ကို အသုံးပြုပြီး မြန်မာပြည်သို့ ဘတ် ၂၀၀၀ အနဲဆုံးငွေလွှဲရန်တိုက်တွန်းပြီးအောင်မြင်စွာငွေလွှဲရမည်။
17. ဖိတ်ခေါ်သူမှ မိမိဖုန်းနံပါတ်နှင့် ဖိတ်ခေါ်ခံရသူ မိတ်ဆွေ၏ ဖုန်းနံပါတ်ကိုပါ ဖြည့်ရပါမည်။
18. ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဖိတ်ခေါ်သူအတွက် (ဘတ် 50) ကို ဝေါလပ်ထဲသို့7ရက်အတွင်း top up ရရှိပါမည်။